မိုဘိုင်းကိုပြောင်းသောအခါအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအတွက်သော့များ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
မင်းလုပ်လိမ့်မယ် မိုဘိုင်းကိုပြောင်းပါ ဘယ်ပုံစံကိုရွေးရမလဲမသိဘူးလား ဈေးကွက်တွင်လက်မ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများစသည်တို့အမျိုးမျိုးရှိသည်။
များစွာသောလူ, လက်ရှိ "စမတ်ဖုန်းများ" သူတို့ကသူတို့နှင့်အတူလုပ်နိုင်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြင့်သူတို့၏ဘဝကိုပြောင်းလဲနေကြသည်။
သင်လိုချင်လားမိမိကိုယ်ကိုအရင်မေးသင့်သည် များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိသည့်အလွန်ပြည့်စုံသောကိရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုဖြစ်သည် အခြားပြissuesနာများကိုထွက်မတ်တပ်ရပ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြင့်မားသော resolution ကင်မရာရှိသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။
1 မိုဘိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့အခါ operating system ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
2 Android နှင့် iOs
မိုဘိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့အခါ operating system ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
စဉ်းစားသောအခါမိုဘိုင်းကိုပြောင်းလဲသောအခါအရေးကြီးဆုံးသော variable များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းဖြစ်သည် device လည်ပတ်မှုစနစ်။ ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးရှိသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှရရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ဖုန်း၏“ စည်းရုံးရေး” လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ မတူညီသောအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဒေါင်းလုပ်များ၊ မျှဝေထားသောဖိုင်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည့်အရာ၊ ဖတ်သည့်အရာ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းမွန်သော operating system တစ်ခုရှိပါကဤအရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအချိန်ဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
လက်ရှိမိုဘိုင်းဖုန်းများသည်များသောအားဖြင့်ဖိုင်များ၊ ဒေတာများ၊ ဤကန ဦး ရရှိနိုင်သည့်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်၊မှတ်ဉာဏ်ကဒ် "သို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်.
Android နှင့် iOs
နည်းပညာဈေးကွက်တွင် operating systems များစွာရှိသည်။ အသုံးအများဆုံးများထဲတွင်မော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည် အန်းဒရွိုက် နှင့် iOs ဖြစ်ခြင်း။ Android စနစ်ဟာအသုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အရာဖုန်းမော်ဒယ်များပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ကရရှိနိုင်ပါသည်။ iOs စနစ်သည် Apple မှထုတ်လုပ်သောဖုန်းများအသုံးပြုသောသီးသန့်စနစ်ဖြစ်သည်။
စပိန်တွင်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှလက်ကိုင်ဖုန်းရောင်းချမှုသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၃၇၀% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ Sony, Apple, Samsung နှင့် LG တို့ကဲ့သို့သောအရေးအကြီးဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်တရုတ်မော်ဒယ်လ်များ၏အမှတ်တံဆိပ်များကိုကူးယူထားသည့်ဤ“ စန်း” တွင်အကူအညီမဲ့နေခြင်းဖြစ်သည်။
မြင်ကွင်းပေါ်ရှိရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများစသည်တို့ကိုချမှတ်ထားသည်။ အဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုပို။ ပို။ ရောင်းချလျက်ရှိသည် "Phablets"၊ စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်အကြားဆက်စပ်မှု.
El အမြဲတမ်းအချက် မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြန့်ချိလိုက်သောမိုဘိုင်းကမည်သည့်ကဒ်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့်တယ်လီဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည့်အချိန်တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပုံရိပ်ရင်းမြစ်များ - Cupon.es / eju.tv
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » နည်းပညာ » မိုဘိုင်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ယခုအချိန်တွင်။ ဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲ။
ဒီနွေရာသီမှာဘောင်းဘီတိုဘယ်လိုဝတ်ရမလဲ (Reiss ရဲ့အဆိုအရ)